कारागारमा सुरु भएको प्रेम अन्ततः एउटै डोरीले सिध्यायो ! - Kendrabindu Nepal Online News
कारागारमा सुरु भएको प्रेम अन्ततः एउटै डोरीले सिध्यायो !
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार १८:०६
काठमाडौं । झण्डै साढे ७ वर्षअघि एक फौजदारी अपराधमा खोटाङ रुपाकोट मझुवा गढी १० का जयप्रसाद गिरी खोटाङ जिल्ला कारागार पुगे । त्यही समयमा खोटाङ कारागार आइपुगिन् खोटाङ याङ्खा ५ दिपुङकी २६ वर्षीया उमिता दमाई । उनी पनि फौजदारी अभियोगमै जेल परेकी थिइन् ।
कारागारको वातावरणमा रमाउनु उनीहरूको बाध्यता थियो । त्यो जेलको बसाइसँगै उनीहरूको जीवनमा नयाँ अध्याय पनि सुरु भयो । संयोगले दुवैको भेट भयो । दुवै नजिकिए पनि । सुखदुःख साटियो ।
रहँदाबस्दा जयप्रसादको मन उमितातर्फ नजिकियो । उनको मनलाई न त जातले रोक्यो न त परिवारले । पिरतीको गाँठो कसियो । छोराछोरी पनि बिर्सिएर नजिकिए उनी उमितासँग ।
यता उमिता पनि घरपरिवारमा नपच्ने काम गरेर जेल आइपुगेकी थिइन् । उनलाई पनि आफ्नो विगतका तुलनामा जयको साथ प्रिय लाग्न थाल्यो । अरूको लागि त्यो कारागार थियो तर उनीहरूका लागि भने उक्त स्थान सर्वस्व भइदियो । साथ थियो मन परेको मान्छेको अनि मनमा थियो जेलबाट छुटेपछिको प्रेमिल कल्पना !
प्रतीक्षा केवल छुट्नुको थियो ।
अन्ततः प्रतीक्षाको त्यो घडी पनि आयो । ७ वर्षपछि उनीहरू दुवै कारावासको सजाय भुक्तान गरी निस्किए ।
जयप्रसाद मजदुरी गरेर आफ्नी पत्नीसँगै काठमाडौं बुढानिलकण्ठमा बस्न थाले भने उमिता खोटाङमै बसिन् । दूरी टाढा भए पनि मन नजिकै भएकाले फोन संवाद भइरहन्थ्यो ।
जयले पैसा र नयाँ कपडा उमितालाई दिन थाले । कमाइको पैसा घर नपुगेपछि श्रीमतीसँग झगडा पर्न थाल्यो जयको ।
सम्बन्ध गोप्य राख्दाराख्दै पनि एकदिन जयकी छोरी सुनिताले त्यसको सुइँको पाइन् । त्यसपछि त परिवारमा सबैलाई थाहा भइहाल्यो । आफ्नो परिवार असन्तुष्ट भए पनि जयले उमितासँगको सम्बन्ध कायमै राखे । बरु फोन सम्बन्ध अझ बढ्न थाल्यो, उनीहरू थप नजिकिए ।
एक हप्ताअघि उमिता काठमाडौँ आइन् जयलाई भेट्न । तीजको दिन उनीहरूको भेट भयो । जयकी छोरी भन्छिन्– बाबुको फोन बेलुका छ बजेसम्म लागेको थियो । त्यसपछि मोबाइल अचानक अफ भयो ।
भोलिपल्ट बिहान पशुपति भण्डारखालको जंगलमा एउटै पासोमा जय र उमिताको निष्प्राण शरीर तुन्द्रुंग झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्यो । यसरी कारगारबाट सुरु भएको प्रेमकहानीसँगै दुवैको जीवन पनि अन्त भयो पशुपतिनजिक ।
जिल्ला कारागार, निष्प्राण शरीर, प्रेमकहानी, बुढानिलकण्ठ
Prevनेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनाव रोक्न सर्वोच्चको आदेश
फोटो कथाः ऋषेश्वर महादेवस्थानमा सप्तऋषि पूजाNext